Wararka - Xaqiiqda ku saabsan miisaska qaxwada iyo maxaad ugu baahan tahay mid
Waxaan had iyo jeer helnaa su'aalo, midkeenna ugu caansan waa haddii aad u baahan tahay miiska qaxwada. Weydiiso naqshadeeye kasta oo gudaha ah wayna kuu sheegi doonaan, ficillada foosha ayaa qaab kasta u sameysmaya. Maxaad u abuureysaa qol qurux badan hadaadan waligaa isticmaali doonin? Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la dejiyo sidaad u adeegsan lahayd meel bannaan kahor intaadan bilaabin dukaamaysiga. Qolkaaga fadhiga, waxay u badan tahay inaad daawan doontid telefishanka, marti gelinayso asxaabta, oo aad reerka la baashaalidoonto. Waa qol loogu tala galay in lagu raaxeysto.
Gali miiska kafeega. Fadhigaaga kadib, waa qeybta ugu muhiimsan qolkaaga fadhiga maxaa yeelay wuxuu hayaa cabitaanno, aaladdaada fog, qalabka wax lagu akhristo, waana meel cagahaaga la dhigo. Qol kasta oo fadhiga ahi wuxuu u baahan yahay mid, waxaanan halkan u nimid inaan kugula socodsiino waxa ay tahay inaad tixgeliso ka hor inta aanad mid dooran.
1. Qiyaasta Miiska Qaxwada
Miiskaaga qaxwada waa inuu u dhexeeyaa 14-18 hiish meel kasta oo ku xeeran, waana hubaal inuusan ka badnaan 24 inji. Marka haddii aad dejisay qorshahaaga dabaqa ah, waa inaad awood u yeelatid inaad aragto inta miis kafee ah aad u baahan tahay.
Qolalka aad u deggan ee aad u ballaaran, tixgeli inaad isticmaasho laba miis oo kafee ah oo midba midka kale ka xigo. Ama haddii qolkaaga fadhiga uusan ahayn meel la maro, waad sii weynaan kartaa.
2. Tixgeli Qaabka
Meelo iyo qaabab kala duwan ayaa ku baaqaya qaabab kala duwan, laakiin halkan waa wax laga fikiro. Qaab dhismeedka ka sii xir xiran, laba jibbaaran ama leydi ayaa si fiican u shaqeynaya.
Haddii qolkaaga fadhiga uu yahay meel la maro, oo aad had iyo jeer ku dhex socoto miiska qaxwada, wareega si fiican ayuu u shaqeeyaa.
Qurux ahaan, waxaan jecelnahay inaan isku dheelitirno qaabab wareegsan iyo laba jibbaaran oo meel bannaan ah, sidaa darteed haddii inta badan qalabkaaga guriga ay yihiin laba jibbaaran (u maleyso kursi leh gacmo tuxedo ah, dabka wareega oo laba jibbaaran, iyo miisaska laba jibbaaran), miiska qaxwada wareega wuxuu ku darayaa dheelitir. Haddii kale, haddii aad leedahay gacmo curvy ah oo ku yaal alaabta gurigaaga, muraayad wareegsan oo weyn, iyo miisaska dhinacyada ku wareegsan, miis afar geesle ah ama afargeesle ah ayaa si qurux badan u shaqeynaya. Waa wax walba oo ku saabsan dheelitirka.
3. Qolka dhammee
Qolku yuusan isticmaalin isla dhammeystirka dusha kasta, sidaa darteed sida qaabka oo kale, miiska qaxwada ayaa noqon kara hab wax cusub loogu soo kordhin karo booskaaga. Haddii aad ku haysatid maro sariirtaada sariirtaada ama waxyaabo badan oo daxal ah, miis bun ah oo dhalaalaya ama dhalaalaya ayaa ka soo horjeedda muuqaalkaas adag. Ama haddii aad qolkaaga fadhiga ugu isticmaali doontid daawashada TV-ga, dooro dhammeystir aanad ka fiirsan doonin cagahaaga inaad saartid, sida qoryaha waxyar laga jaro ama ottoman dahaadh leh.
4. Shaandhaynta Miiskaaga Qaxwada
Marka aad soo xulato miiskaaga qaxwada, tixgeli qalabka. Qolka qoyska ee aad ka daawaneyso TV-ga, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad meel badan uga tagto cagaha kor u qaadista iyo dhigitaanka cabitaannada. Miiska qaxwada leh shelf hoose ayaa si fiican uga shaqeeya goobahan maxaa yeelay waxaad ku ridi kartaa buugaag iyo baakidh hoostooda, adoo ka tagaya qollo badan dusha sare.
Dhammaan qalabka ka dhig mid hoose, maxaa yeelay waxaad dooneysaa inaad wax ka aragto korka dushooda. Wax kasta oo aad u dheer ayaa xannibaya khadkaaga aragtida.
Ku dar daruuriga: waxyaabaha akhriska, sanduuqa dharka, xeebta, sanduuqa meelaha fog fog, shumaca, buugaagta ciyaarta, ama wixii kale ee aad si joogto ah u isticmaasho waa la soo bandhigi karaa.
5. Cusmaaniyiinta iyo Kutladaha
Hadda, maahan in qol kasta oo fadhiga uu yeesho “miiska qaxwada” - si kale haddii loo dhigo, waxaad u isticmaali kartaa ottoman, pouf, ama koox ka kooban miisas yar oo ka mid ah xaaladaha qaarkood. Waxa muhiimka ah ayaa ah inaad ku haysato wax meeshan shaqo - ottoman, laba ama saddex miisas dhinac ah oo la isugu geeyay, ama miis dherer is biirsaday oo dhaadheer ayaa dhammaantood shaqeyn kara iyadoo kuxiran sida aad u isticmaali doontid aagga fadhigaaga.
6. Miisaska qaxwada iyo qaybaha
Haddii aad qayb qayb leedahay, waxaad u yara dhowaan kartaa miiskaaga qaxwada. Qeybo badan ayaa leh chaise mid ama labada daraf, sidaa darteed malaha inaadan cagaha saarin miiska qaxwada. Tani waxay ku siinaysaa fursad dheeri ah oo aad ku isticmaasho miisaska dhalooyinka ama biraha. Waxa kale oo aad halkan ku yara yarayn kartaa maxaa yeelay waxay ka yaraanayaan socodka cagaha iyo madadaalo yar.